Waxaad u maleyneysaa in AirPods kaliya ay wanaagsan tahay sababtoo ah ma aysan isku dayin kuwan dhabta ah ee dhageysiga sarre ee sarreeya - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Waxaad u maleyneysaa in AirPods kaliya ay wanaagsan tahay sababtoo ah ma aadan isku dayin kuwan sirta sarre ee sarreeya - BGR
Waxaad u maleyneysaa in AirPods kaliya ay wanaagsan tahay sababtoo ah ma aadan isku dayin kuwan sirta sarre ee sarreeya - BGR
Apple ayaa soo saartay nambarada jiilka labaad ee AirPod, laakiin kuma jiraan wax horumarin ah ee qaabeynta ama tayada codka. Dhab ahaantii, dhab ahaantii uma baahna horumarin tayada codka. Laakiin naqshaduhu waa mushkilad sababtoo ah talooyinka caagga ah ee sariiraha marnaba iskama goynin codka. Haddii aad rabto kombiyuutarrada dhegaha ee aan dhererka lahayn ee dhawaaqa xitaa ka wanaagsan oo leh talooyin silikoon ah, iska ilaali dareenka dhawaaqa cajiinka ah. U fiirso samaacadaha dhegahaaga Master & Dynamic MW07 True Wireless . Nagu kalsooni, marna kuma soo laaban doontid AirPods ka dib markaan isku dayay walxahan.
Master & Dynamic MW07 Meelaha dhabta ah ee MW07 wireless waxay ku salaysan yihiin tiknoolajiyada casriga ah iyo farsamada. Gacan-siis ah gacmeed-gacmeed iyo farsamooyin farsamaysan oo farsamo ah oo ciriiri ah oo ciriiri leh oo ciriiri leh si loo gaarsiiyo tayada codka sare. Qaybaha farsamooyinka casriga ah, sida beryllium XYUMX, gawaarida "fender fender", tiknoolajiyada qalabka kor loo qaaday, iyo dareemayaasha indhaha ee loogu talagalay inay si toos ah u akhriyaan ama u hakadaan dhagaxyada maqalka, waxay muujinayaan in marka ay timaaddo abuurista dhagaysiga ugu wanaagsan dhageysiga wireless, faahfaahintu aad ayey u yar tahay.
Waxyaabaha ugu sarreeya: qalabka elektarooniga ah, dhammeystiran oo dabacsan, naqshad fudud iyo naqshad jilicsan
Acoustic Exceptional: Heeso-sarre ah, Heerka Xidhan ee Bixllium Customised Customized Sound
Raaxada sarreysa iyo taamkaba: Abuurida silikooniga silikiciga ah ee loo yaqaan 'Patent Focused Sicicone' ayaa laga heli karaa laba xajmood oo kala duwan oo loogu talagalay hagaajinta habka caadiga ah
Raac @BGRDeals on Twitter si ay kuula socodsiiyaan soo bandhigyada ugu dambeeyay iyo ugu faa'iidada badan. waxaan ka helnaa webka.
Si aad u ogaato waxyaabo badan oo ku saabsan dalabyada martigelinta ah iyo fursadaha fariinta la kafaalo qaado, fadlan u soo dir email sponsorisé@bgr.com
Diyaar u noqo inaad wajahdo cimilada leh Amazon Biyaha aan biyuhu jirin, kan ugu sarreeya, kaliya 20 $ - BGR
Sii nolosha cusub ee kushiiskaaga tooska ah buuggan karintaan ee 13 $ - BGR